थाहा खबर: नेमार कसरी पुगे बार्सिलोना छाड्ने मनस्थितिमा ?
नेमार कसरी पुगे बार्सिलोना छाड्ने मनस्थितिमा ?
८ महिनाअघि बार्सिलोनाले नयाँ सम्झौता नगरेको भए नेमारले २६ मिलियन युरोमा क्लब छाड्न पाउने थिए
साउन १९, २०७४
एजेन्सी : गत मार्चमा बार्सिलोनाले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमै सबैभन्दा ठूलो पुनरागमनको इतिहास रच्यो। ७ मिनेटको अन्तरमा तीन गोल गर्दै बार्सिलोनाले पेरिस सेन्ट जर्माइनलाई ६–५ ले हरायो।
यस खेलका नायक निर्विवाद रुपमा नेमार थिए। उनले अन्तिम ७ मिनेटमा भएका ३ गोलमध्ये सुरुका २ गोल आफैं गरे। निर्णायक गोलका लागि सर्जि रोर्बटोलाई उत्कृष्ट चिप्ड क्रस उपलब्ध गराए।
त्यो रात नेमारको थियो। उनले आफ्नो करियरकै उत्कृष्ट खेल देखाएका थिए। तर चर्चा मेसीको भयो। खेलपछि मेसीले पागल जसरी जीतको खुशियाली मनाइरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। ‘लिजेन्ड इज लिजेन्ड’ भनेर धेरैले क्याप्सन लेखे।
स्पेनिस पत्रिका इल पाइसमा रामोन बेसा गरेको विश्लेषण अनुसार यही रात नेमारलाई ‘अब अति नै भयो’ भन्‍ने लागिसकेको थियो। किनकी यस्तो पटक–पटक भइसकेको थियो।
बार्सिलोनाले खेल जित्दा मेसीको चर्चा हुन्थ्यो। उत्कृष्ट खेलेर पनि नेमार छायाँमा हुन्थे। सन् २०१५–१६ को सिजन मेसी घाइते हुँदा नेमार र लुइस सुआरेजले अग्रपंक्तिमा उत्कृष्ट खेल्दै बार्सिलोनालाई लिगको शीर्ष स्थानमा कायम राख्‍न महत्वपूर्ण भूमिका खेले। तर लिगको दोस्रो चरणका खेलहरु सुरु हुँदा मेसी टिममा फर्किए। लिग बार्सिलोनाले जित्यो। नेमारको प्रदर्शन मेसीको अगाडि छायाँमा पर्‍‍यो।
सन् २०१४–१५ को सिजन बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिगसहित सबै उपाधि जितेर ऐतिहासिक ट्रिबल गर्दा पनि यस्तै भएको थियो। चर्चा मेसीकै भयो। फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड पनि मेसीले नै जिते।
नेमार बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी हुन्। विपक्षीलाई आच्छु–आच्छु बनाउने उनीजस्ता फुटबलर संसारमा निकै कम छन्। उनी उत्कृष्ट ड्रिब्लिङ गर्छन्। पास मिलाइदिन र गोल गर्न उत्तिकै खप्पिस छन्। बार्सिलोनामा १ सय ८६ खेल खेल्दै उनले गरेको १ सय ५ गोल र ५९ असिस्टको तथ्यांकले यही भन्छ। बल होल्ड, क्रस र थ्रो बलमा पनि उनी उत्कृष्ट छन्। लेफ्ट विङ, सेन्ट्रल मिडफिल्ड र फल्स नाइन नेमारलाई जता प्रयोग गरे पनि उनले उत्कृष्ट नै खेल्छन्।
तर झन्डै १ लाख दर्शकले खचाखच हुने क्याम्प नोउ रंगशालामा गोल गरेर जर्सी नम्बर ११ देखाउने नेमार अब पेरिस सेन्ट जर्माइन जाँदैछन्। फ्रान्सेली लिग क्लब पेरिस सेन्ट जर्माइनको छोटो नाम ‘पिएसजी’ हो। कतारी मालिकले क्लबको स्वामित्व खरिद गरेपछि यो क्लबले धेरै स्टार खेलाडीलाई स्‍वागत गरिसकेको छ। विश्व किर्तिमानी रकममा खेलाडी किनेको भने यो पहिलो अवसर हो। क्लबमा अहिले जाभियर पास्टारे, इडिन्सन काभानी, मार्को भेराट्टी, थिएगो सिल्भा, लुकास माउरा, एन्जेल डि मारिया लगायतका विश्वस्तरीय खेलाडी छन्।
खेलाडी अनुबन्धनमा जतिसुकै खर्च गरेपनि पिएसजीसँग बार्सिलोना जत्तिको लोकप्रियता र समर्थक छैनन्। पिएसजीले एकपटक पनि च्याम्पियन्स लिग जितेको छैन जबकी बार्सिलोना युरोपको बादशाह भनेर चिनिन्छ।
पिएसजीको घरेलु मैदानको दर्शक क्षमता बार्सिलोनाको भन्दा ठ्याक्कै आधा छ। घरेलु मैदानमा झन्डै ४९ हजार दर्शक अट्न सक्छन्। त्यसमा पनि मोनाको विरुद्ध हुने घरेलु खेल र च्याम्पियन्स लिगका खेलमा मात्रै दर्शक टनाटन हुने हो। पिएसजीको प्यारापिटमा सिट खाली भएका घटना धेरै छन्।
त्यसैले त लियोनल मेसी, आन्द्रेस इनिस्टा, लुइस सुआरेज, जेरार्ड पिके लगायत टोलीका धेरै खेलाडी नेमारको निर्णयबाट स्तब्ध छन्। उनीहरुलाई के लागेको छ भने नेमारले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि बार्सिलोनामै बस्‍नुपर्छ। पिएसजी गएर जोखिम मोल्ने मिल्दैन किनकी बार्सिलोनाजस्तो क्लब संसारमै अरु कुनै छैन। क्लबमा बस्‍न उनीहरुले पटक–पटक सुझाव दिएका थिए। तर नेमारले टेरेनन्।
लामो समयसम्म मौन रहेका नेमारले अन्तत बार्सिलोना छाड्नका लागि क्लबसँग अनुमति मागिसकेका छन्। बुधबार अभ्यास सत्रमा आफ्ना बाबुसँगै पुगेका नेमारले प्रशिक्षक अर्नेस्टो भेलभार्डो र क्लबका खेलाडीहरुसँग बिदा मागे। ‘जान्छु’ भनेपछि प्रशिक्षकले रोक्ने कुरा भएन। भेलभार्डोले नेमारलाई आफ्नो अनुबन्ध प्रक्रिया चाडैं टुंग्याउन सुझाव दिए। उनको सफल भविष्यको कामना गरे। त्यस लगत्तै मेसी, सुआरेज लगायतका खेलाडीले समाजिक सञ्जालमा ‘नेमार निकै उत्कृष्ट खेलाडी रहेको’ भन्दै उनको प्रशंसामा केही शब्द खर्चिए। अनि सफलताको शुभकामना दिए।
अब विश्वका ३ उत्कृष्ट स्ट्राइकर मेसी, नेमार र लुइस सुआरेजले एकैसाथ खेलेको हेर्न फुटबल पारखीहरुले पाउने छैनन्। एमएसएनका नामले चिनिएको यो जोडीले पछिल्ला ३ वर्ष विश्व फुटबलमा तहल्का पिटेको थियो।
खेल सुरु भएर सहकर्मी खेलाडीहरु बलको पछि दौडिएका बेला थुप्रैपटक नेमार मैदानमा जुत्ताको तुना कस्दै गरेको अवस्थामा देखिन्छन्। तर उनी बलसँगै दौडन माहिर छन्। उनको शक्ति र स्तरका कारण विपक्षीहरु तर्सन्छन्।
उनीमाथि के पनि आरोप छ भने उनी गोल गर्नुपर्ने बेलामा पनि विपक्षीलाई छक्याइरहेका हुन्छन्। कतिले त नेमार स्वार्थी र घमण्डी भएको आरोप समेत लगाउँछन्। तर पछिल्ला समय यस्ता आरोपहरु उनले चिर्न थालेका छन्।
प्रिसिजन टुरअन्तर्गत युभेन्टस् र म्यानचेस्टर युनाइटेड विरुद्धको खेलमा उनले मेसीसँग गोलका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो कि भन्‍ने देखिएको थियो। तर रियल म्याड्रिड विरुद्धको खेलपछि के देखियो भने नेमार नम्बर १० नै बन्‍नकै लागि जन्मेका खेलाडी हुन्।
गोल्डेन बलको खोजी
नेमार बार्सिलोनाका स्टार हुन्। तर शंका नगर्दा हुन्छ टोलीका लिजेन्ड मेसी नै हुन्। मेसीले बार्सिलोनाको जर्सी लगाएर ला–लिगामा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने, सबैभन्दा धेरै पास मिलाउने, एकै सिजन धेरै गोल गर्ने लगायतका थुप्रै कीर्तिमान रचेका छन्।
क्लबबाट खेल्दा मेसी र नेमारबीच भने अचम्मको सम्बन्ध थियो। समर्थकहरुले मेसीलाई माथि राखेजस्तै नेमार पनि मेसीलाई आर्दश मान्थे। मेसी नेमारलाई माया गर्थे। मेसीले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिएलगत्तै नेमारले जवाफ फर्काएका छन्, ‘धन्यवाद दाजु। तिमीलाई धेरै मिस गर्नेछु मेरो काका!’
नेमारले बार्सिलोनामा गोलका लागि गरेका ५९ असिस्टमध्ये २२ असिस्टमा मेसीले गरेका छन्। मेसीले नेमारका १ सय ५ गोलमध्ये २० गोलका लागि असिस्ट गरेका छन्। क्लबमा यति सुमधुर सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेमार र मेसी दुबै चिरप्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रका कमाण्डर हुन्। २५ वर्षका नेमारले ब्राजिलको कप्तानी गर्छन् भने ३० वर्षका मेसी अर्जेन्टिनाको कप्तानी गर्छन्।
ब्राजिलको राष्ट्रिय टोली नेमारलाई नै केन्द्रमा राखेर निर्माण भएको छ। आगामी वर्ष रुसमा हुने विश्वकपमा छैटौं पटक उपाधि जित्‍ने ब्राजिलको सपना छ। त्यसैले आफ्ना कप्तान मेसीको छायामा बसेको धेरै ब्राजिलीहरुलाई पचेको छैन। सायद यो अर्को कारण हुनसक्छ, जसले गर्दा नेमारले क्लब छाडे। उनी ब्राजिलमा जस्तै युरोपमा पनि नम्बर १० नै हुन चाहन्छन्। टोलीको मियो बन्‍न चाहन्छन्।
नेमारले अझै फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जित्‍न बाँकी छ। एकपटक उनी फिफा वर्ष खेलाडीको दौडमा तेस्रोसम्म भएका छन्। त्यतिबेला उपाधि मेसीले जितेका थिए। बार्सिलोनामा बस्दा जतिसुकै सफलता हासिल गरेपनि उनले फिफा वर्ष खेलाडीको अवार्ड जित्‍ने सम्भावना कम रहन्छ किनकी उनले उत्कृष्ट खेल्नु भनेको मेसीका लागि पनि उत्‍कृष्ट खेल्ने वातावरण तयार गरिदिनु हो। त्यसैले मेसीसँगको सहकार्य तोडेर नयाँ यात्रा थाल्नुको उद्देश्य वर्ष खेलाडीको अवार्ड वा गोल्डेन बल जित्‍नका लागि सहज बाटो खन्‍नु पनि हो।
उनी पिएसजी जानुको अर्को कारण हो। पिएसजीले उनका लागि बार्सिलोनालाई २ सय २२ मिलियन युरो त बुझाउने छ नै, उनको तलबमा समेत वार्षिक ४५ मिलियन युरो खर्च गर्नेछ। बार्सिलोनामा उनले पाउने तलबभन्दा यो तलब कता हो कता माथि छ।
गत वर्ष भएको नयाँ सम्झौता अनुसार बार्सिलोनामा उनले करकट्टीपछि १६ मिलियन युरो पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए। यो रकम लियोनल मेसीले बार्सिलोनामा पाउने रकम र क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिडबाट बुझ्‍ने रकमभन्दा कम थियो। तर पिएसजीमा उनले करकट्टीपछि ३० मिलियन युरो पाउने बताइएको छ।
बार्सिलोनाका लागि पनि नेमारको सम्झौता फाइदाजनक नै छ। ८ महिनाअघि बार्सिलोनाले नयाँ सम्झौता नगरेको भए नेमारले २६ मिलियन युरोमा क्लब छाड्न पाउने थिए। तर ८ महिनाअघि सम्झौता (जसमा नेमार सन् २०२१ सम्म क्लबमा रहने उल्लेख) गरेपछि बार्सिलोनाले २ सय २२ मिलियन युरो उनलाई बेचेबापत पाउने भयो।
बार्सिलोना आफै‌ भने पछिल्ला केही वर्ष खराब समयबाट गुज्रिरहेको छ। चाहे मेसीसहितका खेलाडीहरु क्लबको वर्तमान बोर्डसँग असन्तुष्ट भएको घटना होस्। नेमारलाई भित्र्याउने क्रममा कर छली गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष सान्द्रो रासोलले राजीनामा गर्नुपरेको घटना होस् वा ३ वर्षअघि पूर्व प्रशिक्षक टिटा भिलानोभा र गत वर्ष क्लबका लिजेन्ड जोहान्स क्र्युफको मृत्युको घटना होस्। यस्तो परिस्थितमा नेमारको बहिर्गमन बार्सिलोना समर्थकहरुका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने नै भयो।
तर साँचो के हो भने सन् २०१३ मा झन्डै ४० मिलियन युरोमा सान्तोस छाडेका नेमारबाट बार्सिलोनाले धेरै लिएपनि शतप्रतिशत लिन सकेको थिएन। नयाँ प्रशिक्षक प्रशिक्षक अर्नेस्टो भेलभाडाले नेमारको बर्हिगमनसँगै टोलीमा केही परिवर्तन गर्न सक्छन्। यसले बार्सिलोना समर्थकहरुमा आशाको सञ्चार पनि गराउन सक्छ।
मेसीलाई नै केन्द्रमा राखेर उनले टोली निर्माण गर्ने सम्भावना धेरै छ। यस्तो भएमा सन् २००९ पछि पेप गार्डिओलाले बनाएको टोलीजस्तै हुनेछ बार्सिलोना, जहाँ अन्य स्ट्राइकर मेसीको सहयोगी मात्रै हुनेछन्। जाभीको रिक्तता हटाउन सक्ने मिडफिल्डरको खोजी पनि बार्सिलोनाले गरिरहेको छ। तर अहिलेका लागि 'पर्ख र हेर' बाहेक अर्को विकल्प छैन।
बार्सिलोना समर्थकले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने विश्व कीर्तिमानी मुल्यमै सरुवा भएपनि नेमारले क्लबलाई धोका दिएका छैनन्। सन् २००० को घटना सम्झनेहरु अहिले पनि नेमारलाई उच्च सम्मान गर्छन्।
नेमारअघि विश्व कीर्तिमानी मुल्यमा बार्सिलोना छाड्ने खेलाडी लुइस फिगो हुन्। १७ वर्षअघि उनी ६० मिलियन युरोमा रियल म्याड्रिड गएको घटनाको घाउ बार्सा समर्थकहरुमा अझै बाँकी छ। यसपटक नेमार पिएसजीको सट्टा रियल म्याड्रिड गएको भए के हुन्थ्यो?
जारी विश्वकपमानै सर्वाधिक युवा स्टार केलियन एमबाप्पेले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नयाँ स्टारको रुपमा स्थापित गरेका छन्। एम्बाप्पेले एन्ट...
घर पुग्याे विश्व विजेता फ्रान्स, राष्ट्रपतिले गरे स्वागत, 'लिगिओग डी' अनर सम्मान
२० वर्ष पछि विश्व विजेता बनेर घर फर्किएको फ्रान्सेली टोलीको भव्य स्वागत भएको छ। रुसको मस्कोमा आइतबार राति भएको फाइनलमा क्रोएसियालाई ...
युभेन्टसमा रोनाल्डोको भव्य स्वागत
पोर्चुगलका स्टार स्टाइकर क्रिश्टियानो रोनाल्डो टुरिन पुगेका छन्। रोनाल्डो प्रेमिका जर्जिना रोड्रिग्वेजका साथ प्राइभेट जेटबाट इटाली पुगेका हुन्। के...
ऐतिहासिक यात्राका लागि नेपाली टिमको बिदाइ
काठमाडौं : नेपाल पहिलो एकदिवसीय तथा त्यसअघि लर्डसमा हुने टी–२० त्रिकोणात्मक श्रृखंलाका लागि बिहीबार बेलायत प्रस्थान गर्दै छ। लन्डन...
एम्बाप्पेले विश्वकपमा पाएको पाँच लाख डलर अनाथ बालबालिकालाई
फ्रान्सका खेलाडी केलियन एम्बाप्पेले विश्वकपमा आफूले कमाएको पाँच लाख अमेरिकी डलर च्यारिटीलाई दान दिएका छन्। एम्बाप्पेले फ्रान्सको प्रिमि...
जुम्लामा तनाव (फोटो)
सरकारलाई सचेत गराउन कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्म : नेता पौडेल
केसीका समर्थकले रोके मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीलाई, वार्ता जारी
प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल निरीक्षण
काठमाडौं आउन मानेनन् केसी, सरकारले अपहरण गर्न लागेको आरोप, अडियो
टिचिङमा भिडे डाक्टर, तनाव शिक्षण अस्पताल